नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्री की थापा बन्लान ! - Sagarmatha Online News Portal
नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्री की थापा बन्लान !
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व चयनका विषयमा उच्च तहमा छलफल सुरु भएको छ ।
वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली यही असार २५ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि मुलुकले २८ औं महानिरीक्षक पाउँनेछ । २८ औं महानिरीक्षक बन्ने भाग्यशाली प्रहरी अधिकारी को हुनसक्छ । आज हामीले त्यसको विश्लेषण गर्दैछौ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक का लागि शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पाल छन् । नेपाल प्रहरीमा थापा र पालसँगै एआईजी लम्सालले ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउने भएकाले थापा र पालमात्रै आईजीपीका दाबेदार हुन् । उनीहरू दुवैजना २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।
यी दुईमध्ये जो आईजीपी बने पनि नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण १९ वैशाख २०७९ सम्म अर्थात २ वर्षभन्दा कम कार्यकाल रहनेछ । अहिले थापाले नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग र पालले कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग सम्हालेका छन् । प्रहरीको अहिलेसम्मको रेकर्डमा थापा र पाल दुबैजना ठूलो विवादमा तानिएका छैनन् ।
थापाले अहिलेसम्म झापा, कास्कीलगायतका जिल्लासहित महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, प्रहरी प्रवक्तालगायत महत्वपूर्ण मानिने स्थानको कमान्ड सम्हालेका छन् । त्यस्तै पालले कास्की, रूपन्देही, धनुषा, प्रदेश २ र विशेष ब्युरोलगायत महत्वपूर्ण मानिने स्थानको कमान्ड सम्हालेका छन् ।